Ikhaya langoku le-Ski elinombono okufutshane ne-Hunter & Windham
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJim
Ikhaya lethu ligumbi langoku, lokuphumla lokuthomalalisa, ukuphonononga, kunye nokuthatha ixesha lokuphefumla umoya omtsha wasentabeni. Yenzelwe ukuphumla, ixesha losapho, kunye nemisebenzi yangaphandle engapheliyo.
Kotha umlilo ogqumayo ngaphakathi okanye ngaphandle kwindawo entle yomlilo welo hlobo lipholileyo kunye nobusuku bekwindla. Ukufutshane nokuhamba kunye nokutshisa ilanga echibini ehlotyeni kunye nokutyibiliza ebusika.
Isanda kulungiswa igumbi lokulala elimbini, igumbi lokuhlambela eligcweleyo elise-East Jewett, NY, embindini weCatskill ebekwe nje iiyure ezimbini emantla eSixeko saseNew York kunye nemizuzu nje kude nokuthenga, iindawo zokutyela, ukukhwela intaba kunye nokutyibilika ekhephini. Iimbono ezintle kunye nokukufutshane koku kulandelayo:
Hunter Mountain: 4.8 miles
Windham Mountain: 7.9 yeemayile
Idolophu yaseTannersville: iimayile ezi-5.6
I-Scribner's Lodge: iimayile ezi-4
Deer Mountain Inn: 4.1 miles
Emantla / eSouth Lake: 8.7
Ichibi laseColgate: iimayile ezi-3.6
4.99 · Izimvo eziyi-88
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- East Jewett